के रगत पातलो र रक्सी मिश्रण गर्न सुरक्षित छन्? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी प्रेस घरपालुवा जनावर चेकआउट समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी समाचार स्वास्थ्य भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> रगत पातलो गर्दा रक्सी पिउन सुरक्षित छ?
यदि तपाइँ एन्टिकोआगुलेन्ट लिइरहनु भएको छ, अन्यथा रगत पातलोको रूपमा चिनिन्छ - स्ट्रोकको रोकथामको लागि, एट्रियल फाइब्रिलेशन , गहिरो नसा थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिजम, वा असंख्य अन्य मेडिकल अवस्था मध्ये एक जुन स्वभावले गर्दा हुन सक्छ। रगत थप्ने तपाईलाई यो तथ्य थाहा छ कि यी औषधीहरूले तपाईंको रक्तस्रावको खतरा बढाउँछन्। तपाईको रगतमा पातलो हुनु र रगत बग्ने जोखिमलाई बढाउने के हो? मदिरापान गर्दै।
दुबैलाई सँगै राख्नुहोस् र रक्तस्रावको जोखिम अझ बढ्छ, डाक्टर होली अल्भाराडो, फर्म.डी, का क्लिनिकल फार्मासिस्टले भने। ड्यूक स्वास्थ्य जो पहिले कार्डियोलोजी क्लिनिकमा एन्टिकोआगुलेसन फार्मेसी विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दछ।
रगत पातलो गर्दा म रक्सी पिउन सक्छु?
सामान्यतया, मँ भन्छु कि [एन्टीकोआगुलेन्ट्स लिँदा पिउँदा] यो नराम्रो सोच हो, डा। अल्भाराडो भन्छन्। म सुझाव दिन्छु कि व्यक्तिहरू अलग रहनुहोस्।
यस मामिलालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, रक्सी पिउँदा कलेजोमा हुने मेटाबोलिक परिवर्तनले रगत पातलोको प्रभावकारितामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्छ, रणनीतिक पहलका वरिष्ठ निर्देशक जोन बेकनर भन्छन्। राष्ट्रिय समुदाय फार्मासिष्ट संघ ।
यसले औषधी कम प्रभावकारी बनाउन सक्छ, वा यसले कार्यको त्यो विशेष संयन्त्रलाई बढाउन सक्छ र यसको विपरित प्रभाव (जस्तै भारी ब्लीडिंग पनि हुन सक्छ), बेकनर भन्छिन्, नतीजा व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ।
Eliquis मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Eliquis मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
म मिक्स गर्न सक्छु? कुनै रगत पातलो र रक्सी?
ठीक छ, तर के तपाइँ यसलाई ईम्बिप गर्न सुरक्षित बनाउन औषधिहरू स्विच गर्न सक्नुहुन्छ? सबै पछि, त्यहाँ बजारमा असंख्य रक्ता पातलो छन्।
योजना को सफलता दर के हो b
दुर्भाग्यवस, होईन — यसले केही फरक पार्दैन कुन anticoagulant तपाईं लिनुहुन्छ। चेतावनी ड्रग्सको सम्पूर्ण कक्षामा लागू हुन्छ, सहित:
Coumadin ( धेरै बिरामीहरू वारफेरिन लिन्छन् , जेनेरिक संस्करण)
त्यो भनेपछि, क्लिनिकल परीक्षणहरू डा। अल्भाराडो भन्छन् कि एलिक्विस जस्ता नयाँ एन्टिकोआगुलेन्ट एजेन्टहरूसँग सम्बन्धित रक्तस्राव जोखिम कम गम्भीर हुन्छ। (एलीक्विस प्राप्त भयो २०१२ मा एफडीए स्वीकृति ; यसको जेनेरिक समकक्षहरू पछिल्लो बर्ष स्वीकृत भए ।)जे होस्, त्यसले एलिकिस र मदिराको कम्बोलाई पास दिदैन — यो अझै खतरनाक छ, बेकनर र डा। अल्भारादो जोड दिन्छन् (अरु सबैले जस्तै)।
मदिरा र रक्ता पातलो मिश्रणको साइड इफेक्ट
चाहे तपाईं पिउनुहुन्छ वा पिएन (आशा राख्नुहुन्न, तपाईंको सुरक्षाको लागि) जब एन्टीकोआगुलेन्ट्स लिँदै हुनुहुन्छ, खोजीमा असामान्य रक्तस्राव को संकेत । चिकित्सा सेवा लिनुहोस् यदि तपाइँ अनुभव गर्नुहुन्छ:
नाकको ब्लीड्स, विशेष गरी अनियन्त्रितहरू
अपर GI ब्लीडहरू, कालो / ट्यारी स्टूलले संकेत गरेको छ
तल्लो GI रगतहरू, स्टूलमा चहकिलो रातो रगतले संकेत गर्छ
कटौती र स्क्र्यापहरू जो रक्तस्राव रोक्दैनन्
अत्यधिक / असामान्य चोट
झर्को पछाडि टाउको दुखाइ, चक्कर
बान्ता खूनी छ वा कफि मैदान जस्तो देखिन्छ
केहि अवस्थाहरूमा - यदि तपाईले गन्धको रक्तस्राव वा चोटपटकको अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य पटक, ER को लागी तत्काल यात्रा वा 11 १११ मा कल गर्न आवश्यक छ, डा। अल्भाराडो भन्छन्, किनभने केहि रक्तस्राव एपिसोडहरू जीवनलाई जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यदि एक बिरामी लड्यो र उनीहरूको टाउकोमा लाग्यो भने, उनीहरूले इंट्राक्रानियल रक्तस्राव अनुभव गरिरहेको हुन सक्छ र यसलाई महसुस पनि भएन, उनी भन्छिन्। र तिनीहरू 'म ठीक लाग्दिन,' जस्तो भएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न [धेरै ढिलो] हुन सक्छ।
त्यसोभए, म फेरि कहिले पिउन सक्दिन?
जे भए पनि बेकर्नर र डा। अल्भाराडो आफ्ना बिरामीहरुलाई एंटीकोआगुलेन्ट लिई कडा मद्यबाट अलग रहन हौसला दिन्छन्, तर उनीहरु मन्जुरी दिन्छन् कि मध्यम, छिटपुट प्रयोग सक्छ केही व्यक्तिहरूका लागि ठीक हुनुहोस्। तर मध्यमको के मतलब वास्तवमा के हुन्छ? ठीक छ, जबकि मदिरा दुरुपयोग र मदिरावाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थानले यसलाई महिलाको लागि एक दिन र पुरुषको लागि दुई पेयको रूपमा परिभाषित गर्दछ , रगत पातलो लिने व्यक्तिको लागि त्यो रकम अत्यधिक र असुरक्षित मानिन्छ। यहाँ मुख्य शब्द छिटपुट छ। अर्को शब्दहरूमा, अब र त्यसपछि विशेष अवसरमा।
यदि मसँग बिरामी छ जो मेरी छोरीको बिहे भइरहेको छ र म टोस्टमा भाग लिन चाहन्छु भनेँ। म भन्छु यो ठीकै छ यदि तपाईसँग एउटा गिलास छ भने, डा। अल्भाराडो भन्छन्। तर मलाई लाग्छ कि यो रोगीहरूको लागि महत्वपूर्ण छ जससँग एक गिलास पनि छ भने मात्र चेतावनी संकेतहरूको बारेमा सचेत हुन र [तिनीहरू] के भित्र पस्दैछन् भन्ने कुरा जान्न।
के तपाइँ claritin र benadryl सँगै पित्ती को लागी लिन सक्नुहुन्छ
वयस्कहरु को लागी काउन्टर खोकी औषधि मा
योजना बी कति दिन पछि काम गर्दछ
तपाइँको रक्त शर्करा कुन दायरा मा हुनु पर्छ?
मलाई कसरी थाहा छ यदि मसँग ल्याक्टोज असहिष्णुता छ